ကိုဗစ်ကာလမှာ DIY နည်းနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆံပင် ဘယ်လို ညှပ်မလဲ? - Chelmo News Portal
Home›Beauty›ကိုဗစ်ကာလမှာ DIY နည်းနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆံပင် ဘယ်လို ညှပ်မလဲ?
ကိုဗစ်ကာလကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အခုလို အချိန်မှာ ဈေးဆိုင်တွေ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်တွေ နဲ့ Beauty Salon တွေလည်း ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ ဆံပင်ညှပ်ချင်သူတွေ၊ အလှပြင်ချင်သူတွေ၊ ခြေသည်းလက်သည်း လှီးချင်သူတွေ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အချိန်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ Quarantine လုပ်နေသူတွေက မိသားစုဝင် အချင်းချင်း ဆံပင်ကို ညှပ်ပေး၊ ပြုပြင်ပေးတာတွေ ရှိသလို တစ်ယောက်တည်း Self Isolation လုပ်နေရသူတွေ ဆိုရင်လည်း ဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက် အတော် ဒုက္ခရောက်တဲ့ ကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကို မသွားနိုင်ခင်မှာ ဆံပင်ကို အရှည်ထားပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့ အကြံပေးကြတာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ် အိမ်မှာလည်း DIY ဆိုတဲ့ Do It Yourself ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ညှပ်မယ်၊ တိမယ်၊ ခုတ်မယ်၊ ပြုပြင်မယ် ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်းကရိယာ စုံစုံလင်လင်ရှိရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ အကြံပေးကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကပ်ကြေးကောင်းကောင်း၊ တိတဲ့ဖြတ်တဲ့ စက်ကောင်းကောင်းတွေ ဝယ်ထားဖို့လိုသလို အွန်လိုင်းကနေလည်း ဆံပင်ညှပ်နည်းကို လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ မညှပ်ချင်တဲ့သူတွေ ကတော့ ဆံပင်အရှည် ထားကြသလို စိတ်ရှုပ်တဲ့သူတွေ ကတော့ ကတုံး တုံးလိုက်ကြပါတယ်။
ကဲ…ဒါဆိုရင် DIY ဆံပင်ညှပ်နည်းလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ပြုပြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်
ယခုလက်ရှိ Rating အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Thai TV Series ...
(၂၀၂၀)ခုနှစ်အတွင်း အယ်လ်ဘမ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး K-pop Girl Groups များ